Hel Freemake Great ah Mac iyo Windows Alternative
> Resource > DVD > Freemake Alternative: Download Freemake for Windows iyo Mac Alternative
Freemake oo manta noqotay mid si degdeg ah u koraya si kor loogu qaado wax soo saarka oo lacag la'aan ah, oo ay ku jiraan video Converter, video downloader, ciyaaryahanka music, iwm Waxa uu isticmaalaa madal ffmpeg lacag la'aan ah si ay u horumariyaan barnaamijyada video iyo diinta ka maqal ah. Inkasta oo wax soo saarka Freemake waa bilaash oo si sahlan ay u isticmaalaan, qaar ka mid ah muuqaalada muhiim u ah video madadaalada maqan. Waayo, kanu, a kale Freemake waa xoog badan yahay xalka.
Halkan waxaan aad ugu boorinayna Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ( Video Converter ) sida Freemake u Mac oo kale Windows siday u kala horreeyaan. Looma baahna in la soo dajiyo barnaamijyada kala duwan Freemake mar dambe. Hel tan kale Freemake oo dhan xal video yihiin on your computer. Windows iyo version Mac Labaduba waa la heli karaa, marka la barbar dhigo Freemake xal Windows-kaliya.
Qeybta 1: Sida loo Isticmaalo Freemake u Mac Alternative (libaax buurta taageeray)
Qeybta 2: waa maxay waxay bixisaa Freemake Alternative
Qeybta 3: Freemake for Windows Alternative
Dadka isticmaala waxyaabaha Freemake la jiitay waxaa laga yaabaa in ay halleeyo lillaahinimada iyo in ay shaqooyin ka heli sameeyo. Video Converter Ultimate for Mac Fududeeyaa video caadiga ah iyo diinta audio ee farahaaga. Hoos waxaa ku qoran sida ay u shaqayso in Mac.
Talaabada 1: DVD Import, video, ama audio files
Markii barnaamijka bilaabo, waxaad arki doonaa suuqa kala ah 3 doorasho: Beddelaan, Guba, oo Download. Dooro mid ku xiran tahay waxa aad doonayso in aad qabato. Waxaad arki doonaa daaqadaha aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Rightmost waa meel aad u dajiyaan karaa video ama maqal. Dhammaan alaabta laga keeno muujiyaan doonaa saxaarad shayga. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ama wax ka bedel wax ka soo xulay haddii loo baahdo.
Talaabada 2: Dooro qaab wax soo saarka aad
Riix qaab icon hoose si ay u muujiyaan liiska qaabka wax soo saarka, iyo ka dooro mid ka mid ah liiska pop-up ah. Waayo, waxaad u sahlanaato, qaabab wax soo saarka ay si fiican u kala saaraa. Waxaad tusi kartaa wax badan oo fursado ah ee qaab la doortay, ama xataa astaysto aad qaab u gaar ah.
Freemake Talooyin kale:
1. hawlaha DVD la xiriira, xulashadan la siiyaa inthe "Guba" interface: SuperDrive, DVD Folder, .dvdmedia, iyo ISO Files. No liiska la xushay laga heli karo.
2. Dhammaan qalabka tafatirka video ka mid yihiin, sida beddesha, jar, dalagga, qabsiga, Cinwaan, watermark, iwm
Talaabada 3: diinta Bilow
Ugu dambayn, riix badhanka badalo hoos ku qoran si aad u bilowdo qaab beddelidda. Gadaal ugu soo fadhiiso si aad u nasato iyo tan kale oo Freemake samayn doonaa inta ka dhiman.
Sida Freemake dhan-in-ka mid ah u Mac oo kale Windows, Video Converter Ultimate siinayaa kuwaas muuqaalada hal meel,
Video Converter : Beddelaan video oo ka mid ah qaabab loo jecel yahay!
Shawladda Audio : ka DVD, video files oo online videos Waraaqda audio.
DVD Converter : Beddelaan DVD disc in video files on computer ciyaar aan DVD disc.
DVD gubi : Gubashada video files si DVD si fudud oo dhaqso.
Video Downloader : Downloads online videos inuu u ciyaaro offline on qalabka computer oo la qaadi karo.
Freemake Audio Converter u Mac : Beddelaan audio dhexeeya MP3, AAC, AC3, M4A, MKA, regelingen, FLAC, OGG, daanyeer, MP2, Amr, AIFF.
Video Converter Ultimate Kale oo uu leeyahay version Windows, muuqan shaqeynayaan isla version Mac. Sida version Mac sida fiican u dhigma ka badan Freemake u Mac, waa kale oo dhan-in-mid xal u ah Freemake for Windows 8/7 / Vista / XP / 2003/2000 / NT4. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan hubi in ay hage user.